Sawirro: Aroos naadir ah oo ka dhacay Gaarisa, lamaane aan wax maqal – Warfaafiye:
Sawirro: Aroos naadir ah oo ka dhacay Gaarisa, lamaane aan wax maqal
Ali Mohyadin May 16, 2018 0
Magaalada Garish ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa waxaa ka dhacay aroos naadir ah ku ah gobolka Waqooyi Bari Kenya, halkaasi oo ay ku aqal galeen lamaane aan waxba maal “dhasoolayaal”.
Arooskaan oo soo jiitay bulshada gobolkaasi ayaa waxaa isku calmaday Maxamed C/xamiid iyo Najma Yuusuf, kuwaasi oo arooskooda ku baxay qarash fara badan sida uu sheegay aabaha Caruuska, si aan loo arkin in uu ka duwan yahay dadka kale ee caadiga ah.
Maxamed iyo Najma ayaa labadooda isfahmeen, waxayna rajeynayaan in ay dhalaan caruur ilaa 5-7 gaaraya, halka Maxamed uu jeclaan lahaa inuu ku curto wiil kadibna gabar ugu xigsato.
“Waalidkay ayaa aad iigu dadaalay waxna i baray, ina garabtaagnaa ilaa iyo heerkan, soomaaliduse aad bay u takooraan dhagoole yaasha, guryaha ayay ku hayaan, marka waa in ay ogaadaan ahmiyadda ay leedahay in wax la baro dhagooleyaasha”, yuu yiri Maxamed oo luuqadda dhagoolayaasha adeegsanaaya.
Wuxuu sheegay in uu carruurtiisa jeclaan doono haddii ay dhagoole yaal noqdaan iyo haddii kalaba. Cabdixamiid Sheekh Xasan Shiil oo ah aabaha carruurka ayaa sheegay in uu dhalay saddex wiil iyo labo gabdhood isla markaasna ay aysan dhammaantood waxba maqlin isla markaasna aysan hadlin.
Cabdixamiid wuxuu sheegay in labii gabdhood laga guursaday, Maxamedna uu soo calmaday gabadh sidiisa oo kale aan waxba maqlin isla markaasna hadlin isla markaaasna uu ku taageeray.
Wararkii u danbeeyay dagaalka Tukaraq ee Somaliland iyo Puntland
Michael Keating oo fariin deg deg ah u kala diray Somaliland iyo Puntland
Kulankii Trump iyo Kim Jong-un oo halis ku jira kadib dhoolatus milateri oo..
Sawirro: Aroos naadir ah oo ka dhacay Gaarisa, lamaane aan…
Wararkii u danbeeyay dagaalka Tukaraq ee Somaliland iyo…
Michael Keating oo fariin deg deg ah u kala diray Somaliland…
Kulankii Trump iyo Kim Jong-un oo halis ku jira kadib…